विशेषज्ञको सुझाव : कोभिडपछि स्वास्थ्यमा यस्ता समस्या देखिए ज्यानै जानसक्छ - नेपाल कुरा
काठमाडौं । कोभिडको संक्रमणबाट मुक्त भइसकेपछि पनि स्वास्थ्यमा देखा पर्नसक्ने केही लक्षणहरुलाई बेवास्ता गर्न नहुने चिकित्सकले सुझाव दिएका छन् ।
नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलका सिनियर फिजिसियन तथा कार्डियोलोजिष्ट डा. जेपी जैसवालका अनुसार पछिल्लो समय नेपालमा पोस्ट कोभिड अर्थात कोभिडपछिको समस्या विकराल बन्दै गएको छ।
डा. जैसवालका अनुसार शरीरमा तागत नै नभएजस्तो महसुस भयो, दमको जस्तो समस्या भयो र माथि उल्लेख गरिएका लक्षणहरु देखिए तत्काल अस्पताल जानुपर्छ र विशेषज्ञबाट उचित परामर्श लिन आवश्यक छ ।
डा. जैसवाल भन्छन्–‘पोस्ट कोभिडपछि देखिने समस्याहरुको बेवास्ता नगर्नुहोस् । यसले ज्यानै जानसक्छ । समयमै अस्पताल आएर विज्ञले सुझाएको जाँच गरी परामर्शका आधारमा औषधि लिन थाले ज्यान जोगिनसक्छ ।’ यो समाचार हेल्थपोस्ट नेपालबाट साभार गरिएको हो ।
बिरामीको चाप बढेपछि अस्पतालमा रगतको अभाव
बेनी अस्पतालमा पहिलोपटक थाइराइडको उपचार शुरु